Waraana Tigiraay: Raayyaan ittisa biyyaaa fi humni addaa naannoolee TPLF irratti 'tarkaanfii dhumaa akka fudhatan' kallattiin kenname - Wanofi.com
Ibsi waajjiricha irraa kennamee, TPLF Itoophiyaa diiguuf humnoota biyya keessaa fi alaa wajjin hojjechaa turuu himuun, humna shororkeessaadha jedhan kana irratti tarkaanfii cimaan fudhatamuu akka qabu waamicha dabarse.
Haleellaan TPLF bane uummata biyyattii hundarratti akka ta’e hubatamee, uummatni waraana TPLF irratti gaggeeffamutti makamuu fi deeggaruu akka qabu ibsi waajjiira MM bahe hime.
”Lammiileen Itoophiyaa umuriin keessan eeyyamu raayyaa ittisa biyyaatti makamaa, kaan ammoo waan dandeessaniin raayyaa ittisa biyyaa cina dhaabadhaa,” kan jedhu ibsi kun, mootummaan erga gar-tokkeen dhukaasa dhaabuu labsee yeroo jalqabaaf dhukaasatti deebi’uu isaa ifaan labse.
Motummaan dhukaasa dhaabuu gam-tokkee labsuulleen humnootni TPLF garuu erga Maqalee fi naannoo Tigiraay irra caalaa deebisanii qabatanii booda bakkeewwan tibba waraanaatti naannoo Amaaraan na jalaa fudhataman jedhu deebisuusufi ulaa gargaarsi namommaa ittiin naannicha qaqabu banachuuf jechuun waraana naannoollee ollaa keessatti babal’isu himunsaa ni yaadatama.
Boodaras ammoo TPLF dhukaasa dhaabuuf tarreewwan haal-dureewwan lafa godhus mootummaan federaalaa akka hin fudhanne ibseera.
”Humni ittisa biyyaa, humni addaa fi milishaan naannolee humna shororkeessaa TPLF irratti irree keessan jabaa fi tarkaanfii keessa deebii hin qabne akka itti agarsiiftan kallattiin isiiniif kaa’ameera,” jedhe ibsi waajjira ministira muummee kun.
Waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru ji’oota sagal lakkoofsisuun lubbuu kumaatamootaa balleessee qabeenya biliyoonaan tilmamamus barbadeessera.
Dhiyeenya mootummaan qonnaan bultootni waktii gannaa lamaaf tasgabbii dhabuun yoo hin oomishiin hafan rakkoo hamaaf saaxilamu jennee dhukaasa dhaabne kan jedhe.
Kanaanis lafa naannoo Tigiraa oomishaaf oolu keessaa %70 qotameera jedhe. Sanyii filatamaa fi xaa’oo bitee mootummaan akka qophheesseerus hime.
Mootummaan Itoophiyaa humnootni TPLF garuu naannolee ollaa akka Affaarii fi Amaaraa irratti haleellaa taasisanis itti fufaniiru jechuun himata.
Kana hordofees dhuma torban darbeerra ibsa Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa baaseen, sababii heleellaa humnootiin TPLF naannoolee ollaa keessatti raawwataa jiruun obsi motummaa dhumaa jiraachuu himuun, humna raayaa guutuu bobbaasuun tarkaanfii fudhachuuf kan dirqamu ta’u ibsee ture.
Ibsa waajjirichaa har’a bahe kunis TPLF diina biyya keessaa fi alaa waliin tahuun Itoophiyaa diiguuf hojjechaa ture jedhe. Haa tahu malee diinotni biyya alaaf keessaa TPLF waliin hojjetan jedhaman eenyufaa akka tahan waan ibse hin qabu.
Maqaa gargaarsaan galanii kanneen kanneen TPLF deeggaran harkaa harkatti kan qabaman akka jiran ibseera. Tibbana dhaabbileen gargaarsaa lama yeroodhaaf sochii Itoophiyaa keessatti godhan akka dhaaban taasisamunsaanii ni yaadtama.
Dabalataan hawwasni idil-adunyaa dhugaa lafa jiru dhiisee gurra isaa iyya qaama balleessaa hojjetuu TPLF’f kenne jechuun komata.
Biyyootni alaa akka Ameerikaa fi dhaabbileen namoomaa hedduun akka qaamolee lamaan gidduutti dhukaasni dhaabbatee mariin furamu waamicha gochaa turan.
Adoolessa 5, 2021 haleellaa Affaaritti lammiilee nagaa irratti raawwateen ijoollee dabalatee namootni 200 ol ajjeefamaniiru. Mootummaan humnootni TPLF buqqaatota irratti haleellaa nabuun akka ajjeesan hima.
Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa garuu humnoota mootummaa waraana nurratti bananii duubatti deebi’antu tarkaanficha fudhate jechuun tiwiitera isaa irratti barreesse.
Haleellaa kana dhaabbanni UNICEF haalaan balaaleffachuun, dhukaasni gama lamaaniin dhaabbachuun waldhabdeen mariin akka hiikamus gaafateera.
Ibsa waajjira MM kana irratti humnootni TPLF konkolaattotni dhiyeessi deeggarsa namoomaa qabatanii imalaa turan akka Tigiraay hin galle danquu, yakka gudeeddii haadholii fi shamarran irratti raawwachuu, ijoollee waraanaaf filuu fi bobbaasuun yakka gurguddaa hojjechaa turan jedhe.
Gama biraan waraana ji’oota sagaliif Tigiraay keessatti gaggeeffamaa tureen humnootni mootummaa fi loltoonni Ertiraa motummaa bira goruun lolaa turan yakka gudeeddii fi ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwataa turan himatamaa turan.
1 thought on “Waraana Tigiraay: Raayyaan ittisa biyyaaa fi humni addaa naannoolee TPLF irratti ‘tarkaanfii dhumaa akka fudhatan’ kallattiin kenname”
thanks for posting best appilication and news ond new